Uyifaka njani iXubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus | Ubunlog
Uyifaka njani iXubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus
UPablo Aparicio | | Ezinye iidesika, Ubuntu, Xubuntu
Ukuqhubeka nezifundo zethu zokufaka iincasa ze-Ubuntu, namhlanje kufuneka senze into echazayo uyifaka njani iXubuntu 16.04 I-LTS Xenial Xerus. I-Xubuntu isebenzisa imeko yemizobo ye-Xfce, oko kuthetha ukuba yinkqubo yokusebenza ye-agile ngaxeshanye ukuba yenziwe ngokwezifiso kakhulu. Zeziphi iikhompyuter endinokucebisa ngazo uXubuntu? Ewe, kwiikhompyuter ezinezixhobo ezinqongopheleyo, kodwa hayi kakhulu kangangokuba awukwazi ukufaka inkqubo yokusebenza evumela ukuba kwenziwe utshintsho.
Kuya kufuneka ndivume ukuba umfanekiso weXubuntu ubonakala usisiseko kum, ngendlela ngokufanayo noLubuntu, kodwa ngokungafaniyo nohlobo lwe-LXDE, utshintsho oluninzi lunokwenziwa kuyo ngendlela elula njengoko siza kwenza kwi-Ubuntu MATE endiyithandayo kakhulu. Njengoko senzile kwamanye amanqaku, siyakucebisa ngezinto ezimbalwa ukuba uqwalasele inkqubo yakho yokusebenza ngendlela othanda ngayo.
1 Amanyathelo okuqala kunye neemfuno
2 Uyifaka njani iXubuntu 16.04
3 Yintoni omele uyenze emva kokufaka iXubuntu 16.04
3.1 Faka kwaye ukhiphe iiphakheji
3.2 Yongeza abaqalisi besiko
Amanyathelo okuqala kunye neemfuno
Njengamaxesha onke, siya kwiinkcukacha zamanyathelo okuqala afanelekileyo ukwenza kunye nokuba kuya kuthatha ntoni ukufaka i-Xubuntu okanye naluphi na uhambiso olusekwe ku-Ubuntu:
Nangona kuhlala kungekho ngxaki, ukhuphelo luyacetyiswa Yonke idatha ebalulekileyo enokwenzeka.
Iya kuthatha iPendrive I-8G USB (iyaqhubeka), i-2GB (bukhoma kuphela) okanye iDVD yokwenza i-USB ekhuphayo okanye iDVD ebukhoma ukusuka apho siza kuyifaka khona le nkqubo.
Ukuba ukhetha ukhetho olucetyiswayo lokwenza i-USB ekhuphayo, kwinqaku lethu Uyenza njani i-Ubuntu bootable ye-USB kwi-Mac nakwiWindows unokhetho oluninzi oluchaza ukuba ungayenza njani.
Ukuba awukwenzi oko ngaphambili, kuya kufuneka ungene kwi-BIOS kwaye utshintshe iodolo yeeyunithi zokuqalisa. Kuyacetyiswa ukuba uqale ufunde i-USB, emva koko iCD kunye ne-hard disk (Floppy).
Ukuze ukhuseleke, qhagamshela ikhompyuter ngentambo hayi ngeWi-Fi. Ndihlala ndiyithetha le nto, kodwa kungenxa yokuba ikhompyuter yam ayixhumekanga kakuhle kwi-Wi-Fi de ndenze uhlengahlengiso. Ukuba andiyidibanisi nentambo, ndifumana impazamo yokukhuphela iipakeji ngelixa ufaka.
Uyifaka njani iXubuntu 16.04
Ngokungafaniyo nolunye ulwabiwo, xa ususa i-DVD / USB Bootable nge-Xubuntu 16.04, siya kubona ukuba ingena ngqo ubunini (Inkqubo yofakelo). Ukuba ufuna ukuvavanya inkqubo, vala nje ufakelo lwefestile, into endiyenzileyo ukuze ndikwazi ukuthatha izikrini. Khumbula ukuba Iscreen sinokuvela sisicela ukuba sixhume kwi-Intanethi ukuba asikho. Inkqubo yofakelo imi ngolu hlobo lulandelayo:
Kwiwindow elandelayo, ndihlala ndicebisa ukuba zitshekishwe zombini ezi bhokisi ukusukela, ukuba akwenzi njalo, xa uqala inkqubo kuya kufuneka siyihlaziye kwaye kunokubakho izinto ezingasebenziyo, ezinje ngenkxaso yolwimi lwethu. Simakisha ezi bhokisi zimbini kwaye ucofe ku «Qhubeka».
Kwiwindow yesithathu kulapho siza kukhetha ukuba loluphi uhlobo lofakelo esilifunayo:
Uhlaziyo. Ukuba sinenguqulo endala, sinokuhlaziya.
Susa Ubuntu kwaye ufake kwakhona. Oku kunokuba lukhetho ukuba nathi sinesinye isahlulelo ngeWindows, ke ufakelo luya kwenziwa ngaphezulu kwesahlulelo sethu seLinux kwaye asizukuchukumisa abanye.
Cima idiski kwaye ufake. Ukuba sinezahlulelo ezininzi kwaye sifuna ukususa yonke into ukuba ibe neXubuntu 16.04 kuphela, oku kunokuba lukhetho lwethu.
Ukhetho oluninzi. Olu khetho aluyi kuvumela ukwenza, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona kunye nokucima izahlulelo, ezinokufika ziluncedo ukuba sifuna ukwenza izahlulelo ezininzi (ezinje nge / home okanye / boot) yeLinux yethu.
Nje ukuba sikhethe uhlobo lofakelo, sicofa u "Faka ngoku".
Samkela isaziso ngokunqakraza "Qhubeka".
Sikhetha ummandla wethu wexesha kwaye ucofe ku «Qhubeka».
Sikhetha ulwimi lwethu kwaye ucofe ku «Qhubeka». Ukuba asazi ukuba yintoni ubeko lwebhodi yezitshixo, sinokucofa kwindawo ethi "Fumana ubeko lwebhodi yezitshixo" kwaye ubhale ebhokisini ukujonga ukuba yonke into ichanekile na.
Kwiwindow elandelayo, siza kubeka igama lomsebenzisi, igama leqela kunye negama lokugqitha. Emva koko ucofe ku «Qhubeka».
Kwaye ekugqibeleni, siqala kwakhona ikhompyuter.
Yintoni omele uyenze emva kokufaka iXubuntu 16.04
Faka kwaye ukhiphe iiphakheji
Kum, oku kuyinto eqhelekileyo. Zonke iinkqubo ezisebenzayo ziza nesoftware esingasokuze siyisebenzise. Kutheni le nto sifuna inkqubo ekhanyayo ukuba siza kuyizalisa? Kukulungele ukukhulula i-ballast. Ukwenza oku, sivula imenyu (ngasentla ngasekhohlo) kwaye sijonge "isoftware" ukufikelela kwiZiko leSoftware leXubuntu, apho siza kubona khona iipakeji esizifakileyo kwaye sijonge ukuba sifuna ukukhupha nayiphi na. Ngokubhekisele kwiiphakeji esizakuzifaka, apha ngezantsi unezindululo zobuqu eziphantse zafana nezo ndazicebisayo ngomhla wazo Ubuntu MATE:
Synaptic. Umphathi wephakheji.
Shutter. Isixhobo esiphambili sokuthatha izikrini kunye nokuzilungisa kamva.
GIMP. Ndicinga ukuba zininzi iintetho. Eyona "Photoshop" isetyenzisiweyo kwiLinux.
zintsi. Umxhasi wenethiwekhi yeBitTorrent.
Kodi. Umdlali weendaba wayesaziwa njengeXBMC.
I-UNetbootin. Ukwenza ii-USB ezikhoyo.
GParted. Isixhobo sokufomatha, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, kwaye ekugqibeleni, silawule izahlulelo endingaziqondiyo ukuba azifakwanga apha okanye kolunye unikezelo.
I-RedShift. Susa iithowuni eziluhlaza ukusinceda silale ebusuku.
Clementine. Isidlali somsindo esisekwe kwiAmarok, kodwa senziwe lula ngakumbi.
Yongeza abaqalisi besiko
Ikwayindlela ephezulu kum. Iimenyu zokuqala azinakuba nanto iphosakeleyo ukuba bekungafuneki ukuba sithathe uhambo phambi kokucofa usetyenziso esifuna ukuliqhuba. Ukuba kufuneka singene kwindawo ethile amaxesha amaninzi ngemini, olo hambo luba lude, ke kufanelekile ukwenza ubudlelwane. Umzekelo, siya kwimenyu yokuqala kwaye, endaweni yokuchofoza isicelo esifuna ukusivula, nqakraza okwesibini kwaye ukhethe "Yongeza kwiphaneli". Ukuba ayikho kwisikhundla esifunayo, njengokuba kunjalo kwisikrini esedlule, sichofoza kubo kwaye sibarhuqe. Ukuba asikwazi kuba kukho ezinye ii-icon ezivalela indlela yethu, nqakraza ekunene kwezi icon, ungakhangeli ibhokisi ethi "Vimba kwipaneli" kwaye, ngoku siyayihambisa.
Imenyu oyibonayo kumfanekiso odlulileyo yeyona ibonakala xa sicofa okwesibini kwiphaneli ephezulu. Ukuba sifuna ukongeza izinto ezintsha, ezinje ngondlela emfutshane yomyalelo "xkill" (endiwusebenzisileyo xa ndibhala le post) ukuvala naziphi na iinkqubo ezikhohlakeleyo, siza kwenza njalo ngokunqakraza nokukhetha Iphaneli / Yongeza izinto ezintsha ...
Ngaba uyifakile iXubuntu 16.04? Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Xubuntu » Uyifaka njani iXubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus
Kudala ndisebenzisa i-Xubuntu ngaphezulu konyaka kwaye ndiyayithanda, xa inguqulelo ye-16.04 yaphuma ndayifaka.
Andikwazi ukwenza ukuba iseva ye-SAMBA isebenze, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba angenza njani okanye kungenjalo
Ukusetyenziswa kweBluetooth akusebenzi kakuhle nakum.
UJADE (Outra Jade othanda iBTS nayo) sitsho
Ndixabise kakhulu. = D
Phendula JADE (Outra Jade othanda iBTS nayo)
UJosue Cuadros sitsho
nayiphi na iofisi esebenza kule distro?
Phendula uJosue Cuadros
Ndifakele i-xubuntu kumatshini omdala we-3000.Yonke into isebenza kakuhle kum ngaphandle koqwalaselo lwescreen esamkela kuphela isisombululo esincinci 800 × 480. Ndikhangele yonke indawo isisombululo kwaye akukho ndlela ndinokusitshintsha ngayo. Ngokuqhelekileyo imifanekiso iyahamba ngaphandle kwesikrini.
Naluphi na uncedo nceda !!
Phendula ku baetulo
UDavid G sitsho
Andazi ukuba bayiqaphele, kodwa ulwabiwo yiXX (Xubuntu Xenial Xerus)
Phendula kuDavid G
Ingelosi uRodriguez Rodriguez sitsho
Ingelosi, ndiyayithanda iXubuntu 16.04, kodwa ndinento endingenakuyenza ngayo, kukuba andinakutshisa iiCD okanye iiDVD, ke ndingayivuyela kakhulu into yokuba umntu akwazi ukundirekhoda kwaye asule into Ukurekhodwa ukusebenzisa i-DVDSW ebhaliweyo kunokuyixabisa kakhulu.
Imfudumalo ngokubhekisele kubathandi beLinux ngokubanzi.
Phendula u-Angel Rodríguez Rodríguez
I-Meizu Pro 5 Ubuntu Edition ngoku iyafumaneka ukuze ithengwe
Ubuntu ufuna ukukufundisa ukuba uyisebenzisa kanjani i-BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition yakho